Ny famandrihana ny AirTags sy ny iPhone 12 volomparasy. Mihidy ny fivarotana an-tserasera | Vaovao IPhone
Ny famandrihana ny AirTags sy ny iPhone 12 volomparasy. Nakatona ny fivarotana an-tserasera
Jordi Gimenez | 23/04/2021 08:37 | iPhone
Ny Apple Stores dia miomana amin'ny fahatongavan'ny famandrihan'ny AirTags vaovao sy ny loko vaovao ho an'ny iPhone 12, volomparasy. Amin'io lafiny io ny orinasa Cupertino dia nanidy ny fivarotana an-tserasera rehetra ary miomana amidy.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny fahatongavan'ireo vokatra ambiny dia hihemotra, izany hoe tsy ho azo atao ny mitahiry ny zava-drehetra manomboka anio. Ny tranga iMac ohatra dia izao, Afaka manomboka mamandrika amin'ny 30 aprily ho avy ianao.
Ary ny tena izy dia mandeha haingana be ny fotoana ary efa manana ny fiandohan'ny tahiry eto isika. Ny talata lasa teo dia natolotra ny vokatra vaovao ary androany zoma ny sasany amin'izy ireo dia azo tehirizina, ohatra AirTags tsirairay na anaty fonosana efatra fitaovana sy ilay iPhone 12 vaovao volomparasy.
Ny fandefasana entana voalohany dia hatao amin'ny 30 aprily raha ny amin'ireo fitaovana roa ireo Azo antoka fa hahemotra izy ireo rehefa mandeha ny fotoana ary rehefa mihabe ny fangatahana. Koa mamporisika anao izahay raha liana amin'ny fividianana AirTags na iPhone 12 amin'ny volomparasy, aza tara loatra ny famandrihana.
Toa tsy ho tonga mihitsy izy io ary farany efa manana ny AirTags misy eto isika, vokatra iray izay efa nalaza ho elaela ary farany Apple dia natolotra tamin'ny hetsika an-tserasera avy amin'ny Apple Park ny 20 aprily.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Ny famandrihana ny AirTags sy ny iPhone 12 volomparasy. Nakatona ny fivarotana an-tserasera
iOS 15 dia hamolavola endrika ny efijery amin'ny iPhone sy iPad
Apple dia efa manana ny sari-tany nohavaozina tany Espana sy Portugal tamin'ny fizahan-toetra